အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: March 2009
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၄ နှစ်ကပေါ့..
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သေသနဗျူဟာ မိန့် ခွန်း ကအဖိုးတန်
တပြည်လုံး တချိန်ထဲ အုံကြွ
ဒါး။ ဒါးမ ပေါက်ဆိန် ပေါက်ချွန်း
စူးခွ လှံ။ ဒူးလေးမျှား လက်နက်က ရရာ။
တပ်ပျက်အပြေး ဂျပန်တွေ အဆုတ်
ထိုးထွင်း ဥာဏ်၏ သတိ
အဘတို့ဖက်ဆစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တယ်။
ဒို့ တတွေလည်း အာဇာနည်တို့ ရဲ့မျိုးဆက်
ဒို့ ခေတ်ကျမှ အမျိုးဂုဏ်ပျက်ရမလား..
ဒို့ ရဲ့သွေး အနီရောင်မရဲတော့ဖူးလား..
ဤစာသည် ဒို စာ
ဤမြေသည် ဒို့ မြေ..
ဤရေ သည် ဒို့ ရေ.
ဤအမျိုးသည် ဒို့ အမျိုး.
မိမိ စာပေကို မိမိကာကွယ်
မိမိ မြေကို မိမိကာကွယ်
မိမိ ရေကို မိမိကာကွယ်
မိမိ အမျိုးကို မိမိကာကွယ်
အာဇာနည် အဖိုးအဖွား သာဓုခေါ်ရစ်မယ်။
မြန်မာ မြေကို လွတ်လပ်စေ
မသဒ္ဓါ (၃.၂၇.၂၀၀၉) ၆၃ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ သို့ 
ကျဆုံးခဲ့သော ၀ိဥာဉ်များကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေသား။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:50 AM0comments
အမေအို ဆိုပေမဲ့ သတ္တိတော့ ပျိုတယ်..
ကျုပ် မသိလို့ မေးပါရစေ။
၀ရမ်းပါမပါ မေးမိတဲ့ ကျုပ်သမီးနဲ့သား.
ဘာအပြစ်နဲ့ များ ထောင်ထဲထည့်ထားပါသလည်း။
နေလည်စာစားဖို့ မုံ့ ဖိုး သူမသုံးနိုင်ဖူး
တက်တက်လာတဲ့ လောင်စာဈေးနဲ့ ကားခ
နို့ ဆာတဲ့ ကလေး ငိုတာမျိုးဘဲ..
လူကြီးမင်း လုပ်နေသူသူများ စာနာ
တိုင်းပြည်မင်းလုပ်သူရဲ့ ထားရမဲ့ ဂရုဏာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေအရသာမက၊
ပြည်တွင်း မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ ၁၂၄(က)
ပြန်များဖတ်ကြည့်လှဲ့ ပါ ဘိုးတော်။
ငါ ပိုင် ငါနိုင်။
ရှင့် သမီးနဲ့ ကျုပ်သမီးရွယ်တူ..
ရှင့်သမီးက လင်ရှိရက်တေဇနဲ့ ဖောက်ပြား..
ကျုပ်သားသမီး မြေးတွေကို ကျုပ်ရင်ကခွဲပြီး.
အမေ က မြောင်းမြ အကျဉ်းထောင်
အသက်(ရ၀) ကျော် ကျုပ်က အိုမင်းအဖွား..
လူမမည်မြေးကလေး ၂ယောက် အပါး.
ကျုပ်ဘယ်လိုထောင်ဝင်စာ တွေ့ ရမလည်း။
အလှည့်ကျ မနွဲ့ကျစတမ်း။
ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့လာငိုပြမနေနဲ့ 
ကျုပ်တို့မြေးအဖွား သုံးယောက်
ထမင်းရည်ပူရက် ရရင် ရက်ရမယ်။
မြေးလေးတို့ ရယ် အားမငယ်ပါနဲ့ .
မင်းတို့အဖေ အမေ နဲ့
အကို အတွက်သာ ဂုဏ်ယူလှဲ့ 
ဘယ်တော့ မှ အားမငယ်ဖူး.
မဝေးတော့ တဲ့ ဒို့ အောင်သံ
အဖွားရယ် အားပေးပါတယ်။ သားသမီးမြေးတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူရတဲ့အဖွား လေးစားပါတယ်။
(မြေးမ ၂ယောက်နဲ့အပြင်တွင် ကျန်ရစ်သောကိုစည်သူမောင်၏ ဖွားအေသို့ )
ဗကသ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကိုစည်သူမောင်၏ မိဘနှစ်ပါးကို အမူ (၃) ခုဖြင့် တရားစွဲ
ဒီဗွီဘီ ၊ ၁၄ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၊ ၂ဝဝ၇
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ကိုစည်သူမောင်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်က အဖြစ်အပျက်နဲ့ စပ်လျှဉ်းပြီး သူ့ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို မြို့နယ် ရဲစခန်းက အမှုသုံးခုနဲ့ တရား စွဲဆိုထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ အပြီး အောက်တိုဘာလမှာ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကိုစည်သူမောင်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါး နေထိုင်ရာ နေအိမ်ကို ညသန်းခေါင်ကျော်မှာ ဖမ်းဝရမ်းမပါ သက်ဆိုင်ရာ ရယက တာဝန်ရှိသူတွေ မပါဘဲ ရဲအဖွဲ့က ကိုစည်သူမောင်ကို လာရောက် ရှာဖွေရာ ဖမ်းဆီး ရရှိခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီလို လာရောက် ဖမ်းဆီးစဉ် ရုတ်တရက် တံခါး ဖွင့်မပေးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လှိုင်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှူးက တရားစွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွဲဆိုထားတဲ့ အမှု သုံးခုကတော့ ဝတ္တရား နှောင့်ယှက်မှု ပုဒ်မ (၂၃၂) ၊ ဖမ်းဆီးစဉ်မှာ အနှောင့်အယှက်ပြု ဟန့်တားတယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ ငြိမ်ဝပ် ပိပြားမှုကို ထိပါးအောင် လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ စတဲ့ ပုဒ်မတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ ကိုစည်သူမောင်ရဲ့ မိဘ နှစ်ပါး ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးပီတာနဲ့ ဒေါ်နုနုဆွေတို့ကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းဆီး မခံရခင် စွပ်စွဲခံရတဲ့ ပုဒ်မတွေဟာ အာမခံယူလို့ရတဲ့ ပုဒ်မတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ လှိုင်မြို့နယ် တရားရုံးကို တင်တဲ့အခါမှာတော့ အာမခံပေးလို့မရတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ ကြီးလေးတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ ပြောင်းလဲ တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုစည်သူမောင်ရဲ့ မိဘတွေဖက်က လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူက အခုလို ပြောပါတယ်။
“(၂၉၄) လို့ခေါ်တဲ့ ဆဲဆိုတဲ့ အမှုကနေ (၅၅ဝ) ပုဒ်မကို ပြောင်းသွားတယ်။ (၂၉၄) ဆိုတာ သာမန် ဆဲဆိုတာ။ ဆဲဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုရင် အလိုအလျှောက် အာမခံရနိုင်တယ်။ သာမန် ဆဲဆိုတဲ့ အမှုကနေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာနေတာတွေကို ဆူပူသွားအောင် လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မကြီး အကြီးကြီးဆီကို ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ခင်ဗျ။ ဥပဒေရုံးကနေတဆင့် ဥပဒေအကြံပေးကနေ တဆင့် ပြောင်းလဲသွားတာပါ။ တနည်းအားဖြင့်တော့ အာမခံ မရစေနိုင်မဲ့ပုဒ်မကို ပြောင်းလဲစွဲဆိုခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဦးဖိုးဖြူ ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ရုံးချိန်းတွေမှာ ဦးဖိုးဖြူက ဒေါ်နုနုဆွေတွေအတွက် အကြိမ်ကြိမ် အာမခံ တောင်းခဲ့ပေမဲ့ ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ တရားစွဲပြီးတဲ့နောက် ပြစ်မှုပုံစံ (၁ဝ၄) ကို မသွင်းရသေးတဲ့ အတွက် ရုံးချိန်းနှစ်ခုမှာ သက်သေတွေကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့လဲ ဦးဖိုးဖြူက အခုလို ဆက်လက် ပြောပြပါတယ်။
“(၁၉) ရက် နိုဝင်ဘာကတည်းက အမှု စွဲတင်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင် နောက် ရုံးချိန်းဖြစ်တဲ့ (၂၁) ရက်နေ့ နိုင်ဝင်ဘာမှာ ဒီပုံစံကို ပြန်သွင်းရတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီဟာကို ကျနော်တို့ကို ပြန်မသွင်းထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ သက်သေတွေကို ဆင့်ခေါ်လို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ (၂၁) ရက်နေ့ နိုဝင်ဘာမှာ တချိန် (၂၄) ရက်နေ့ နိုဝင်ဘာမှာ တချိန် လုံးဝ သက်သေတွေကို မစစ်ဖြစ်ဘဲနဲ့ ရုံးချိန်းတွေကို ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီတော့ သက်သက်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာ အမှုကို နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခွင့် မရှိ စစ်ဆေးခံပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အလိုအလျှောက် ချိုးပို့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒါပေမဲ့ အခုလ (၆) ရက်နေ့မှာ တရားလို စခန်းမှူးနဲ့ သက်သေတဦးကို စစ်ဆေးခဲ့ရမှာ ဖမ်းဝရမ်း မပါ သက်ဆိုင်ရာ ရယက တာဝန်ရှိသူတွေ မပါဘဲ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးတာ ပေါ်လွင်စေတယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူက အခုလို ပြောပါတယ်။
“တရားလို လုပ်တဲ့လူကို စစ်တဲ့ အခါမှာ အမှုတွဲ ပေါ်ပေါက်ချက်တွေ ဆိုတာ ရှိတယ်။ ရယက သက်သေ လူကြီးကို စစ်တဲ့ အခါမှာ အမှုတွဲ ပေါ်ပေါက်ချက်တွေ ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ နှစ်ယောက်ရဲ့ သက်သေတွေကို စစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ သက်သေတွေဟာ ရပ်ရွာလူကြီး သက်သေတွေ ပါမလာဘဲနဲ့ လာရောက်ပြီးတော့ သူမကို လာဖမ်းဆီးတာမျိုး ပေါ်ပေါက်တယ်။ နောက်တခါ ဒုတိယ အကြိမ်ကြရင်တော့ ရယက လူကြီးကို ခေါ်ခဲ့လို့ ပြောတဲ့ အခါကြတော့မှ ရယက လူကြီးကို သွားခေါ်တယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲ ပေါ်ပေါက်တယ်။ နောက်တခါ ရှာဖွေပုံစံ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ ဖမ်းဝရမ်း ရှာဖွေ ဝရမ်းနဲ့ ပတ်သက်တာမျိုးလည်း ဝရမ်း တစုံတရာလည်း မပါဝင်ဘူး ဆိုတာမျိုးလည်း အမှု စစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာပေါ်ပေါက်တယ်။ သူမကို ဖမ်းဆီးခြင်းဟာ ဥပဒေနည်းလမ်း တကျ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော် အစဉ်တစိုက် မေးတယ်။ အဲဒီတော့ မေးတဲ့ အခါကျတော့ ဒီကိစ္စဟာ ဝတ္တရား နှောင့်ယှက်တာ ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလား ဆိုတာမျိုးလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆူပူအောင် နှောင့်ယှက်တာ ဟုတ်သလား မဟုတ်သလား ဆိုတာကိုပဲ မေးပါ။ မဆိုင်ပါဘူး ဒီ စည်သူမောင် ဖမ်းဆီးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မမေးပါနဲ့လို့ ပြောတယ်။”
ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူ ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးပီတာနဲ့ ဒေါ်နုနုဆွေတို့ နှစ်ဦးကို အခုအခါမှာ အင်းစိန်ထောင်မှာ ချုပ်နှောင်ထားပြီး လာမဲ့ တနင်္လာနေ့ (၁၇) ရက်နေ့မှာ ရုံးချိန်း ထားပါတယ်။ ကိုစည်သူမောင်ကတော့ အောက်တိုဘာလအတွင်း အဖမ်းခံရပြီး အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ အတူ အချုပ်ကျနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး စစ်တွေထောင်ကို ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုစည်သူမောင် ဟာ ဆိုရင်လည်း သူ့ကို ဖမ်းဆီးတုန်းက ချက်ခြင်း တံခါး ဖွင့်မပေးလို့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်း ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် စီ ချမှတ်ခံခဲ့ရသူ မိဘတွေနဲ့ တကွဲတပြား ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာပါ။ အခုဆိုရင် ကိုစည်သူမောင် က စစ်တွေထောင်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးပီတာ က ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်ထောင် နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်နုနုဆွေ ဟာ ဆိုရင် ဧရာဝတီတိုင်း မြောင်းမြ အကျဉ်းထောင်တွေကို ပို့ဆောင်ခံနေရတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ညီမငယ် ၂ ဦး နဲ့ အသက် (၇၀) ကျော် အဖွားသာ ကျန်ရစ်တဲ့ ကိုစည်သူမောင်ရဲ့ မိသားစု အနေနဲ့ အခုလို အခြေအနေမှာ ထောင်ဝင်စာတောင်တွေ့ဖို့ အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။ ကိုစည်သူမောင် ရဲ့ ရင်းနှီးသူ မိသားစု မိတ်ဆွေ တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းဆွေ ကတော့ အခုလို ဆိုပါတယ်။
“သူတို့ မိသားစုတွေကို တကွဲတပြားထား ထားတယ်။ ရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့အဘွားလာတယ်လေ။ အဘွားနဲ့ပဲ တွေ့ရတာပေါ့။ အဘွားကြီးဆို အသက် ၇၀ကျော်လောက် ရှိပါပြီ။ ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ ရုံးထုတ်တုန်းက လာရင် မောမောနေတယ်။ နောက်ပိုင်း မ၀င်ရတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီ အဘွားနဲ့လဲ မတွေ့ရပါဘူး။”
သားတော်မောင် အတွက် အမေ့ စာ
စိတ်မကောင်းလို့ ဆို..မငိုနဲ့ မေ့သား
အမေ့ သက်တမ်း အမေ့ဘ၀..
လူ့ တာဝန် ကျေပြွန်ခဲ့ပြီးပြီ
သခင်မကြီး ဒေါ်လှကြည်၊( သို့ မဟုတ်)
ယုဝတီ ၏ ကလောင်ရှင်ကြည်ဦး.
မြန်မာမှုစာရေးဆရာနန်းညွန့် ဆွေရဲ့ ကြင်ဖော်
နာမည်ကျော် လူရွှင်တော်ဇာကနာ၏ အမိ.
အာဇာနည် မျိုးရိုး ထင်ရှားပါ၏။
စကားပုံ အစုံစုံ နဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့.
မြန်မာ့စာပေ ကို ထိန်းသိမ်း။
၀တ္တရားကျေတဲ့ ဇနီးသည်မ အိမ်ထောင်
မတရားတာ ငုံမခံတဲ့ သတ္တိသွေး..
နောက်မျိုးဆက်များသို့ဝေမျှပေးခဲ့တယ်။
ဝဏ္ဍ. သူရ တေဇ..သား သုံးဦးထဲက
သူရ ဆိုတဲ့ အတိုင်း သတ္တိရဲခဲ့.
နအမ အမြစ်ကို လှုပ်ကိုင် ချိုးနှဲ့ 
ဇာဂနာ ဆို တဲ့..အမေ့သားမောင်ရဲ့
သရော်ဆူး များ စူးရှထက်မြက်
နှုတ်လျှာ ဒါးသွား.ကလောင်တစ်ချက်နဲ့ 
ခိုင်မာသောလက် ပြည်သူ့ အတွက်
သေသော်ထိ ဒူးမထောက်မဲ့ သားကြီး
အမေ မရမက ရောက်တောင်
မတွေ့ ရတဲ့ ထောင်ဝင်စာ..
တမင် ပုဏ္ဍားညှင်းညှင်းတဲ့ နအဖ
အမေ စိတ်ပျက်မယ် ထင်သလား..
ဘာမှ စိတ်မကောင်းနဲ့ သားမောင်..
လွတ်လပ်ပါမှ အမေ့ကို အမျှဝေ..
သားရဲ့ မေမေ ..ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက်
အမေ သားအတွက် ဂုဏ်ယူတယ်။
အာဇာနည် သားများကို..မွေးခဲ့တဲ့အတွက် ကြီးကြီးကျေနပ်မှာပါ။ အစားထိုး မရနိူ်င်သော ဆုံးရှုံးမှု အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူ မသဒ္ဓါမှ နှမျောတသမိပါသည်။ ကြီးကြီးဒေါ်ကြည်ဦးကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ။
သံစဉ်ဒါးသွားတို့ နဲ့ .. သီချင်းသည်
လောကနတ်၏ စည်းနဲ့ ဝါး..
ရန်ဒေါသ အလျှဉ်ကို ဖြေစေခဲ့တဲ့
ရွှေသံစဉ်ဝိုင်းရဲ့ ဂီတမှုး ကိုဝင်းမော်
သံစဉ်ဂီတ ဟာ အသက်ဘဲ
“နဂါးနီ” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ကိုလိုနီခေတ်တော်လှန်ရေး..
"တူယှဉ်ကာတိုက်စို့ "သီချင်းနဲ့ 
ရင်နဲ့ အမျှ ခံစား
သုခုမ နဲ့ဖေါ်ကျူးခဲ့
သွဲ့ ပြောင်းတဲ့ ဂီတာကြိုးများရဲ့ကြား
နှလုံးသွေးနဲ့ ရေးထား သံစဉ်များရှိတယ်။
မြန်မာပြည်သားတို့ ရဲ့ အိပ်မက်ချိုချို
ကျနော်တို့ နေခြည်ကိုကြိုကြစို့ ။
ကျနော့ ရဲ့ ရင်တွင်း တေးသံ
ကျနော့ ပြည်သူတွေ အတွက်
“သဇင်” ရယ် မောင့်အပေါ်နားလည်လှဲ့ ။
သမီးနဲ့ သားတို့ ရယ်
အဖေရဲ့ အနုပညာအတွက် ဂုဏ်ယူရစ်ပါတော့..
မြန်မာပြည် အတွက် အသက်ရှင်နေဆဲ။
မီးကို သတ်မဲ့ ရေ
သံမဏ္ဍိ စိတ်တံခိုးတွေနဲ့ 
ကိုဝင်းမော် သို့ မဟုတ်
ဂီတများ ကို ဖန်ဆင်းသူ။
မသဒ္ဓါ ( ၃။၁၄။၂၀၀၉)
ရွှေသံစဉ်ဂီတမှုး ကိုဝင်းမော် နဲ့ မိသားစု အတွက်..
သီချင်းများ ရှင်သန် နေသ၍ သင် ဆက်လက်ရှင်သန်ဆဲ…
အသေးစိတ် ကိုဝင်းမော် အကြောင်းသိချင်ပါက ဒီလိုပါ
Posted by ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)
“ဘီဘီစီ … ဘီဘီစီကို နားဆင်ပါ
ကျွန်တော်တို့၏ နရသိန် ပရ၀ှဏ်ထဲက လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာ
ရေပန်းစားခဲ့သော သီချင်းလေး တစ်ပိုင်းတစ်စ။
၁၉၉၅-ခု အန်တီစုလွတ်လာချိန်မှာ သူတို့အုပ်စုကသီချင်းလေးတစ်ခွေ ဖန်တီးပြီး အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေး ခဲ့ကြ သည်။
ဒီအတွက် အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုမှ ချီးမြှင့်သော ဆုလာဒ်က “7 years in Prison” ။ ။
တကယ်တော့ သူသည် အနာဂတ်အတွက် အိမ်မက်လှလှလေးများ မက်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး။
၉ ပေပတ်လည် အခန်းကျဉ်းလေးထဲက သောကဗျာပါဒများ ကြားမှာပင် သူ၏ ဦးနှောက်မှ လှပသောသံစဉ် လေးများ စိမ့်ယိုလျက်ရှိသည်။
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ ဆက်ဆံရေး တစ်ရပ်ကို သူနှင့် ထိတွေ့မိသူတိုင်းနှင့် တည် ဆောက်နိုင်သူ။
လူပျိုပေါက် အရွယ်မှာပင် ဂစ်တာမှော် အောင်ခဲ့သူ။
မြန်မာပြည်၏ ထိပ်တန်းတီးဝိုင်းကြီး ဖြစ်သော The Aces တွင် ဦးဆောင်ဂစ်တာကို တီးခတ်ခွင့်ရခဲ့သူ။
န.အ.ဖ စစ်အုပ်စုကပင် သူ ဂစ်တာမှူးအဖြစ် ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်
“ရွှေသံစဉ်” တေးဂီတ၀ိုင်းကို မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များတွင် နေ့စဉ်လိုလို အသုံးပြုခံခဲ့ရသူ။
တက်ကြွမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ အိပ်မက်ချိုချိုလေးများကို သူ၏ Honda Prelude တံခါးနှစ်ပေါက်ကားလေးပေါ်တွင်
ပြည်သူလူထု၏ ဆင်းရဲငတ်မွတ်မှု နေ့စဉ်ဘ၀ ဒုက္ခဝေဒနာများကို လှစ်လျူမရူနိုင်တော့သည့် မေတ္တာတရား ကြောင့် “မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဘက်တော်သားများ”၏ စုရပ်ထဲမှာ
“7 years in Prison”
စစ်အုပ်စု၏လုပ်ရပ်က သူ့ကိုစိုးစဉ်းမျှ တုန်လှုပ်ခြောက်ချားစေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့။
ချယ်ရီအတွက် “ရနံမဲ့ ခရီးရှည်”
န.အ.ဖ အတွက် “Evil go away”
ပြည်သူလူထုအတွက် …….. သီချင်းလေးများစွာ
အိပ်မက်သစ်တွေအတွက် ….. သီချင်းလေးများစွာ
အဖေအိုကြီးနဲ့ အပျိုပေါက်၊ လူပျိုပေါက် ရင်သွေးလေးယောက်
“အလှူတွေကတော့ ချိမ့်ချိမ့်သည်းပဲ … …. … ရေ”
“ဒီတစ်ခါတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်”
ဒီမိုကရေစီလိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ အဝေးရောက် ရဲဘော်တွေအတွက်
စစ်အုပ်စုရဲ့ ယုတ်မာရက်စက်တဲ့ သရုပ်မှန်တွေ
စဉ်ဆက်မပြတ်အောင် ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့
သူ …. …. ….
“7 years in Prison” နောက်တစ်ခေါက်နဲ့
သူ့စိတ်ဓါတ်တွေ မဖေါက်မပြန်၊ မတိမ်းမစောင်းပဲ
ပြုံးရွှင်ချိုမြ၊ အလိုကျသော မျက်နှာများဖြင့်
အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီ မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို မြင်ယောင်လျက်
သံစဉ်လှလှ၊ “အလင်္ကာ” ချိုမြမြလေးတွေ
သူ့ဘက်လို့ သူယုံကြည်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း
သူ့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ ဆုလာဒ်တစ်ခုကို ၀ိုင်းဝန်းဖန်တီးပေးကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
(၁၉၆၅- … … … …)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:23 PM0comments
မလာခဲ့နဲ့တော့ ။ မတွေ့ ချင်ဖူး..
နောင်ကို ထောင်ဝင်စာ လာမတွေ့ နဲ့ ။
ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ အဖေနေတတ်တယ်.
ချစ်သူနဲ့ ကွဲ မိသားစုနဲ့ ကွဲ..
အဖေ့မျက်နှာ ၁၅ မ်ိနစ်တွေ့ ရန်
အမှန်တရားရဲ့ သက်သေ အတွက်
အဖေ တို့ မတော်လှန်..
အဖေတို့ အမှားကို မပြင်ပြန်ရင်..
ပညာရေးပျက် ကျမ်းမာရေး ပျက်
ဘာအနာဂတ်မှ နေရောင် မထွက်တော့ဖူး.
မှောင်မဲမဲ လူရုပ်ပီမယ် မဟုတ်တော့ဖူး
ကျရမဲ့ သွေး..စီးရမဲ့ မျက်ရည်..
အဖေ တစ်ယောက် အနာဘဲခံပါရစေ။
အမှန်တရားရဲ့ လက်နက်ဘဲ အဖေ့ မှာရှိတယ်..
အဖေ့ ရာဇ၀င် အဖေ ရေးခဲ့တယ်.။
သေတစ်နေ့ မွေးတစ်နေ့ .
အမှန်တရား နဲ့ စစ်ထိုးရဲတဲ့ အဖေ
ဒူးထောက်ပြီး အုန်းသန်း အသက်မရှင်ချင်ဖူး..
လက်မြှောက်ပြီး အုန်းသန်း မနေချင်ဖူး
အမှန်တရားနဲ့နေမဲ့ သမီးရဲ့ အဖေ
နာမည်ကောင်းနဲ့ဘဲသေပါရစေ။
မသဒ္ဓါ (၃။ ၁၁။၂၀၀၉)
ဘဘ ဦးအုန်းသန်း (သစ်တောဝန်ထောက်ပောာင်း) နှင့် ပါရမီဖြည့်ပေးသော သူ၏ မိသားစု။ ဘယ်ထောင်ရောက်ရောက် လိုက်ပါကူညီ အားပေးသော သမီးငယ် မအိအိမွန် အားဂုဏ်ပြုပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:47 PM3comments